Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle yonke sinombuki zindwendwe onguRobyn And Robert
Ziphathe kwiiHamptons zakho ngasechwebeni. Indawo yokuhlala yesitudiyo sabucala, umgama nje wemizuzu emi-3 ukuya kumanzi ahlwahlwazayo eGeographe Bay, umkhondo webhayisekile (iibhayisekile ziyafumaneka) kunye neBusselton Jetty precinct.
Paka imoto yakho kwaye uhambe uye kumbindi wedolophu nje imizuzu emi-5 ukuba uyonwabele ukhetho lweendawo zokutyela ezilungileyo, iikhefi kunye neevenkile ezinkulu.
Le yeyona ndawo ifanelekileyo ukonwabela iminyhadala emininzi ebanjelwe eBusselton kubandakanya imidlalo nenkcubeko.
Ukongezwa kwamva nje kwikhaya losapho, le ndlu yesitudiyo incamatheleyo ibonelela ngendawo yokuhlala yabucala ngokupheleleyo, icocekile, icocekile, inesitayile saselwandle esimnandi kubandakanya igumbi lokuhlambela labucala, ikhitshi, indawo yokuhlamba impahla, izibonelelo zebbq kunye nokupaka esitratweni.
Isidlo sakusasa esamkelekileyo selizwekazi elibonisa imveliso yasekhaya sibandakanyiwe.
Izibuko ibhedi iyafumaneka ukuba ifuneka ukuze usana luhlale kwigumbi elinye nabazali
Umamkeli zindwendwe uRobyn noRobert bayonwabele awabo amava e-Airbnb kwaye baya kukuvuyela ukukunceda wenze ukuhlala kwakho kukhumbuleke ngakumbi ngokwabelana ngolwazi lwabo lwasekuhlaleni ngelixa uhlonipha izinto zakho eziyimfihlo.
4.99 · Izimvo eziyi-112
Kwimizuzu emi-3 yokuhamba ukuya elwandle kunye nendawo entle nedlamkileyo yaseBusselton Jetty kunye nentenetya, iqakamba, izitya, ikroti kunye neeklabhu zokudada. Qhubeka nokuhamba kwaye ngemizuzu emi-2 kwaye uya kuba sembindini wesixeko kunye necafe strip.
Indawo entle yokonwabela iminyhadala yaseBusselton kunye nesango lokuya kwingingqi yewayini yaseMargaret River.
Sikwakwindawo entle yokuqalisa kwabo bantu badlamkileyo banomdla wokuhamba intaba kuquka nomzila weKapa ukuya eKapa kunye nohambo lwesangqa oluninzi eLeeuwin-Naturaliste National Park.
Umbuki zindwendwe ngu- Robyn And Robert
Sihlala kwindawo yendlu encanyathiselwe kwistudiyo esandula ukwakhiwa kwaye siyafumaneka ngeengcebiso kunye nencoko ukuba ufuna nantoni na. Wamkelekile ukuba usebenzise igadi kunye nezixhobo zebbq ngexesha lokuhlala kwakho
URobyn And Robert yi-Superhost
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Busselton